Ny departemantan'ny fizahantany any Malawi dia nanatratra ny tsenan'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany any Etazonia
Home » Travel Associations News » Ny departemantan'ny fizahantany any Malawi dia nanatratra ny tsenan'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany any Etazonia
Desambra 5, 2017
Ny departemantan'ny fizahan-tany any Malawi, fizarana iray an'ny minisiteran'ny Indostria, varotra ary fizahan-tany any Malawi, dia nanendry ny consultant amerikana CornerSun Destination Marketing ho masoivohon'ny firaketana an-tsoratra any Amerika Avaratra.
CornerSun dia hifantoka amin'ny famolavolana paikady fidirana an-tsena ho an'i Malawi izay mamaritra indrindra ny fahafaha-manao amin'ny tsena ary mametraka ny fisian'i Malawi any Amerika Avaratra miaraka amin'ireo toerana afrikanina hafa izay niroborobo tato anatin'ny taona vitsivitsy, toa an'i Afrika atsimo.
Fantatra amin'ny hatsaram-panahin'ny mponina ao aminy i Malawi, fantatra amin'ny anarana hoe Warm Heart of Africa. Ity vatosoa tsy dia fanta-daza ity dia betsaka no azo atolotra ao anatin'izany ny fiainana dia, kolontsaina, fitsangatsanganana, toerana mahafinaritra ary mazava ho azy ny farihy Malawi goavambe. Toerana iray mandavantaona, maro no mihevitra azy ho firenena manintona indrindra any Afrika atsimon'i Sahara.
Ny fizahan-tany any Malawi dia nanatri-maso fivoarana mbola tsy nisy toa azy tato anatin'ny taona vitsivitsy. Nisokatra ny efitrano fandraisam-bahiny vaovao ary nitarina sy nohavaozina ny hotely sy ny trano fandraisam-bahiny misy. Ny fotodrafitrasa fizahan-tany dia mijanona kely amin'ny ambaratonga fa avo lenta. Ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina vaovao dia miaro ny hoavin'ny bibidia ao amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny hetsika fiarovana sy programa fitahirizana entana ary manatsara ny traikefa amin'ny safari. Izany rehetra izany miaraka amin'ny fampiasam-bola vaovao amin'ny fotodrafitrasa eo an-toerana dia nahatonga an'i Malawi ho turista fizarana faha-1 misongadina.
"Miaraka amin'ireo Amerikanina mandeha any Afrika amin'ny laharana firaketana ary amin'ny fikarohana hatrany amin'ny toerana tsy hita izay manome traikefa avo lenta, tsy mbola nisy fotoana nahaliana kokoa ho an'i Malawi" hoy ny talen'ny fitantanana CornerSun, David DiGregorio. Notohizany hoe: "Voninahitra ho anay ny misolo tena toeran-kaleha izay natao ho iray amin'ireo fangatahana be indrindra ho an'ireo mpandeha amerikana mahay mitady fitambarana manaitra ny fanomezana voajanahary, kolontsaina ary fiainana any an-tany hafa".
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fitsidihana manan-karena sy maro karazana an'i Malawi dia tsidiho http://www.visitmalawi.mw, araho ny @TourismMalawi ao amin'ny Twitter sy ny fizahan-tany any Malawi ao amin'ny Facebook.
Famaranana andiany faha-5 an'ny Expo momba ny fizahantany iraisam-pirenena Chengdu dia mamarana amin'ny fomba mahomby
Moa ve ny mpanazatra mikarakara bebe kokoa ho an'ny olona tsy afa-mihetsika voafetra?